Sina Dongshen premium premium habibiana tsy misy habibiana resin volo sentetika mitana fanao logo famafazana tarehy borosy fiharatana tarehy mpamokatra sy mpamatsy | Dongmei
Kitapo borosy makiazy
Borosy azo averina
Fanadiovana borosy makiazy
Fehikibo borosy / kitapo borosy
Fitaovana / kojakoja makiazy hafa
Raharaha Palette amin'ny makiazy
Fandraisana tànana borosy
Bowling / Mug
Savony / crème
Makiazy endrika vaovao Dongshen ...
Fitaovana volo bolo sentetika volo hazo vita amin'ny hazo ...
Dongshen lafo volo malefaka hoditra-f ...
Fampiasana borosy makiazy: borosy volo malalaka: ny makiazy vita amin'ny vovony dia manana ...
Fanosotra volo mihantona b ...
- ANDIANA feno hatsaran-tarehy feno borosy makirazy miisa 15 pcs, hatsaran-tarehy rehetra ...
Dongshen lafo vidy maimaim-poana habibiana fibre sentetika volo resin mitana fanao logo borosy tarehy volon-koditra
Ny borosy fanaratsiana Dongshen dia vita tanana amin'ny volon-koditra voajanahary sy ny resina. Natao hanalefaka ny volombava alohan'ny aharatra, tsy misy mahasosotra ny hoditra. Tsy misy fihenan'ny volo, tsy misy fatiantoka tantanana, manala ny sakaizanao maharitra amin'ny fombafombam-bolo isan'andro.
Nandritra ny 40 taona mahery, Dongshen dia namolavola fitaovam-panaratra farany tsara indrindra sy kojakojam-pandehanan-dehilahy mahazatra. Izahay dia mpitarika amin'ny famolavolana ny borosy sy ny famolavolana, manome antoka fa ny vokatra tsirairay avy dia vita amin'ny fenitra avo indrindra.
Ny lovantsika matanjaka sy ny fikatsahana hanome vokatra fakan-tahaka dia hita taratra amin'ny fanolorantenanay ny fahafaham-pon'ny mpanjifantsika amin'ny entana rehetra mitondra ny anarantsika.
Fitaovana fatotra Volo sentetika
Mitantana fitaovana Reota tantana, na namboarina
Haben'ny fatotra Afaka manamboatra araka ny fangatahanao izahay
Loko mitantana Fotsy, mainty, mena, maintso, volafotsy, volamena, soritra, sns… na fanamboarana araky ny fangatahan'ny mpanjifa
Famantarana Borosy Dongshen, na cmpindrana dho hita eo ny sary famantarana
Fonosana Boaty taratasy fotsy / mainty
FANOMEZANA Antoka ara-barotra, T / T, Western Union, Paypal
Ora nanomezana 30-45 andro aorian'ny nahazoana karamaent
- MATERIAL TOP QUALITY: Ity borosy fiharatam-bolo manga ity dia vita amin'ny fametahana resina mafy, ny borosy fiharatantsika dia namboarina tsara hanompo anao mandritra ny taona maro na mihoatra aza.
- HERITSAKA EXFOLIATE GENTLY: Ity borosy fiharatana ity dia matevina sy malefaka tsara hahatsapa ho malama amin'ny hoditrao raha mbola mamita ny asa. Mitondra rano amin'ny tarehy ho an'ny tena aharatra. Ity borosy fiharatana ity ho an'ny lehilahy dia mamorona volondavenona manankarena sy mafana, manome anao traikefa miharatra tsara.
- Mora sy mora ampiasaina, ity borosy fiharatana ity dia malefaka be ary mijery; ny borosy fiharatana dia manana endrika ergonomika izay mahatonga ny fihazonana mahazo aina; Habe tsara ho an'ny tanana rehetra.
- Lavorary toy ny fanomezana: ity borosy kely fiharatana kely natao ho an'ny lehilahy ity dia mety hanome fanomezana tena tsara ho an'ny lehilahy na lehilahy amin'ny fiainanao.
- SERVICE AFTER-SALE: Matoky tanteraka izahay amin'ny kalitaon'ny borosy fiharatantsika. Fa raha tsy afa-po tanteraka amin'ity vokatra ity ianao na inona na inona antony, aza misalasala manontany anay amin'ny fotoana rehetra!
Ahoana no aharatra:
1.Samohy amin'ny rano mafana ilay borosy fiharatana.
2. Asio servieta mafana mando amin'ny tarehy, mando ny hoditrao ary alaivo malefaka ny foton'ny volombava.
3. Ampiasao ny fihodinana borosy fiharatana mba hametahana ny savony amin'ny savony manaratra ny tavanao.
4. Esory ny volombavanao manomboka amin'ny faritra tsy dia rakotra indrindra ka hatramin'ny faritra matevina, amin'izay ilay faritra matevina dia manam-potoana kokoa hanalefaka.
5. Sasao ny tarehinao, diovy amin'ny rano mafana ilay borosy fiharatana ary apetaho amin'ny tompon'ilay fiharatana mba ho maina ho azy mandritra ny faharetana.
Torolàlana momba ny fampiasana:
1. Sasao tsara amin'ny rano mafana ilay borosy aorian'ny fampiasana azy.
2. Aza avela hilona lava loatra intsony ilay borosy.
3. Aza mampiasa otrikaretina mahery vaika na fanafody fanasan-damba - ampy ny rano.
Teo aloha: Dongshen fiharatana borosy tsara indrindra volom-bolo manga resin mitantana marika manokana haben'ny olon-dehibe borosy fiharatana
Manaraka: Dongshen borosy lafo volo voajanahary voajanahary volo bara resin mitana manokana marika borosy fiharatana ho nanalefaka volombava tarehy
Borosy fanaratsiana logo manokana
Resina borosy fiharatra
Borosy fanenomana sentetika
Borosy fiharatana legioma
Borosy fanaratra mando
Dongshen malefaka vita amin'ny hoditra vita amin'ny volony vita amin'ny hazo ...
Dongshen Wholesale avo lenta manokana marika tsy miankina B ...
Dongshen borosy lafo volo voajanahary voajanahary mangatsiaka badger ...
Dongshen 7 pcs mavokely borosy makiazy napetraka lab tsy miankina ...
Vovon-tsakafo malefaka sy maivamaivana ...
Shijiazhuang Dongmei Brush Co., Ltd. dia naorina tamin'ny 1986. Izy io dia orinasa fanaovana makiazy sy fikolokoloana borosy manaratsy miaraka amin'ny varotra / famolavolana ary famokarana.
Izahay dia mamokatra ho an'ny marika borosy makiazy sy haingon-tarehy manara-penitra OEM any amin'ny firenena mandroso any Eropa sy Etazonia, ary manamboatra ny famokarana ODM ho an'ny mpanjifa kely, salantsalany ary lehibe.
© Copyright - 2010-2021: Voatahiry ny Zo rehetra. Vokatra mafana, Sitemap
Faritra fiharatra, Fitaovana borosy makiazy, Barber Shave, Manaova borosy, borosy makiazy napetraka, Mametraha makiazy borosy,